डुडुवामा बहुउद्देश्यी पार्कको प्रचारमा कमी – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः २६ फाल्गुन २०७५, आईतवार १२:२८ March 10, 2019 हातेमालो संवाददाता
बाँके । डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ५ नानपुरमा रहेको बाबुकुवा क्षेत्रलाई सिद्धि विनायक लाईन्स क्लबले बहुउद्देश्यी पार्क निर्माण गरिने भएको छ । बाबुकुवा सामुदायिक वन क्षेत्रसँगै जोडिएको पार्कका लागि ३ हेक्टर क्षेत्रफलको मानव निर्मित पोखरी रहेको छ । यस स्थानमा पार्क तथा पिक्निक स्थलका लागि विभिन्न सहयोगी व्यक्ति, संस्था र वडा नं.५को लगानीमा केही संरचना समेत निर्माण भएको छ ।
सिद्धि विनायक लाईन्स क्लबका अध्यक्ष चिरञ्जिवी ढकालका अनुसार संविधान सभा सदस्य दिनेशचन्द्र यावदको निर्माण पूर्वाधार कार्यक्रमबाट १० लाख लागतमा आश्रय भवन निर्माण भएको छ । डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ५ ले बाटिका निर्माणका लागि ६ लाखमा पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ । क्लबले २ केठे शौचालय निर्माण गरेको छ । सिद्धि विनायक लाईन्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गौचनले गोलघर निर्माण गरी पिक्निकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भैसकेको छ ।
वडा अध्यक्ष परशुराम बुढाथोकीका अनुसार यसक्षेत्रको पर्यटन र नेपालगन्जबासीका लागि पिक्निकका लागि आवश्यक पूर्वाधार भएको यो भन्दा उपयुक्त स्थान नजिकमा नभएको वताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार प्रचार प्रसारको अभाव र केही पूर्वाधार निर्माणमो प्रकृयामा रहेको छ । आफ्नो कार्यकाल भित्रनै यस स्थानलाई पूर्ण पूर्वाधार सहितको पिक्निक स्थान, पौडी स्थान र पार्क निर्माण गर्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।
नेपालगन्ज र यस आसपासका मानिसलाई आकर्षण गर्न सक्ने स्थानको व्यापक प्रचार प्रसार हुन जरुरी छ भने पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पहल भईरहेको समाजसेवी मिन थापा वताउनु हुन्छ । जे जति पूर्वाधार निर्माण भएका छन ति निरन्तर पहलमा भएका हुन अझै पनि यसको रमणीयतालाई पूर्ण गर्न करिब ३ करोड लगानी गर्न सके पूर्ण रुपमा पाउने थियो भन्नु हुन्छ क्लबका अध्यक्ष ढकाल ।
बाबुकुवामा सिद्धि विनायक लाईन्स पार्कका लागि संघीय सरकारका शहरी विकास मन्त्री, प्रदेश सरकार र लाईन्स अन्तराष्ट्रिय क्लबलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको छ । यदि सहयोग समयमा नै पाउन सकियो भने यो स्थान साच्चिकै रमणीय र आसपासका वस्तीका लागि आयआर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको दावी रहेको छ ।